Tijaabo iska qaad haddii aad calaamado covid-19 noqon kara leedahay. Waa kuwan calaamadaha u caadiga ahi:
Neefsashada oo kugu adkaata..
Ka akhriso waxii dheeraad ah oo ku saabsan cudurka Covid-19.
Waxaad sidoo kale u baahan kartaa inaad tijaabo iska qaado haddii kuwan mid ka mid ahi ay kugu dhaceen:
Dhakhtar ama kalkaaliso ayaa kaa dalbatey inaad tijaabo iska qaado.
Dadka covid-19 qaaday badankoodu waxay difaac yeeshaan ugu yaraan lix bilood.
Lahaanshaha difaacu waxa weeyi inaad difaac inuu mar kale kugu dhaco aad ka leedahay.
Tijaabo iska qaad haddii aad covid-19 qaaday muddo ka badan lix bilood oo aad jirato.
Tijaabo iska qaad xitaa haddii lagu tallaalay oo aad jirato. Wax dheeraad ah ka akhri qoraalka Tallaalka ku lidka covid-19.
Waxa jira sharciyo gaar ah oo khuseeya dadka wadan kale soo joogay
Dadka dhalashada wadamada kale sita ayaa u baahan inay warqad cadeyn ah tusaan si ay Iswiidhan ugu soo galaan. Waa inay warqada cadeynta ahi muujiso inaad covid-19 iska eegtay oo aanad cudurka qabin. Taasi kuma khuseyso haddii aad Finland, Danmark, Norway ama Island ka soo safrayso. Wax dheeraad ah ka akhri bogga internetka ee Folkhälsomyndigheten. Boggu waxa uu ku qoran yahay af Ingiriisi.
Waxa jira xeerar khaas ah oo khuseeya haddiii aad wadan ka baxsan Midowga Yurub ka soo safrayso. Taasi waxay sidoo kale khuseysaa dhowr wadan oo kale. Wax dheeraad ah oo ku saabsan wadamada ay khuseyso ka akhri bogga internetka ee booliiska Boggu waxa uu ku qoran yahay af Ingiriisi. Dadka is tallaalay ayaan u baahneyn inay talobixintaas raacaan.
Waa kuwan talobixinadu:
Tijaabada iska qaad sida ugu dhakhsaha badan ee aad ugu kari karto markaad Iswiidhan timaaddo, haddii aanad tijaabo iskaga qaadin si aad Iswiidhan ugu soo geli karto.
Waa inaad guriga joogtaa oo aanad dadka kale la kulmin ugu yaraan muddo todoba maalmood ah.
Mar labaad tijaabo iska qaad markay shan maalmood ka soo wareegeen ka dib markii aad Iswiidhan timid.
Adiga ayaa sidoo kale tijaabo iska qaadi kara. Markaas ayaad heli doontaa macluumaadka ku saabsan sida aad sameyn doonto.
Haddii tijaabadu /shaybaadhku ay muujiso inaanad covid-19 qabin waa inaad guriga joogto ilaa iyo intaad ka soo roonaaneyso oo aanad qandho laheyn
Sii wado inaad talobixinta dawladda raacdo
Waxa muhiim ah inaad yareynta khatarta faafinta infegshanka ee markaad caafimaadka qabto aad sii wadato. Waxay taasi khuseysaa xitaa haddii aad difaac ka leedahay. Sidan samee:
Dadka kale masaafad u jirso.
Raac talobixinta dawladda ee lagu dhimaayo infegshanka.